News Collection: मिस नेपाल सृष्टि भन्छिन्- 'देशको विविधतामा गर्व लाग्छ'
मिस नेपाल सृष्टि भन्छिन्- 'देशको विविधतामा गर्व लाग्छ'
आठ वर्षअघि चितवनबाट सृष्टि श्रेष्ठ परिवारसहित बेलायत पुगिन् । आमा-बुवा र भाइसहित लन्डन बस्दै आएकी उनले दुई वर्षअघि बेलायतमै मोडलिङ पनि थालिन्, दर्जनभन्दा बढी र्‍याम्पमा उत्रिन् । नर्सिङमा स्नातक पढ्दै गरेकी उनलाई चित्तै बुझेन र मिस नेपालमा भाग लिन आइन् । र, ताज पहिरिन सफल पनि भइन् ।
मिस नेपालको ताज पाउँदा आँसु झार्नुभयो नि....
सानैदेखि मिस नेपालको ताज लाउने सपना बोकेकी थिएँ । सपना साँच्चिकै विपनामा परिणत हुँदा खुसीको आँसु आउँदो रहेछ ।
विजेता हुनुको पछिल्तिर आफूमा खास कुनै विशेषता देख्नुहुन्छ ?
आत्मविश्वास, सकारात्मक धारणा र सक्षमता । यिनै गुणले मलाई यो स्थानमा ल्याइपुर्‍याइदियो ।
सपनाको बाटो हिँड्ने प्रेरणाको स्रोत के हो ?
पहिलो स्रोत मेरा बुवा-आमा र परिवार । दोषचाहिँ म आफैं । सपनालाई विपनामा रूपान्तरण गर्न मैले गरेको संघर्ष र मिहिनेत महत्त्वपूर्ण छ । दृढ आत्मविश्वासका साथ काम गरे लक्ष्यमा अवश्य पुगिने रहेछ ।
मिस नेपालको ताज पहिरिँदै गर्दा स्टेजमा सबभन्दा पहिला के सम्झनुभो ?
त्यो बेला मम्मीको अनुहार झलझली सम्झें । उहाँ लन्डनमै हुनुहुन्छ । मिसिङ हर नाउ । हरेक सुखदुःखमा ममलाई सम्झिन्छु ।
अनि बुवालाई नि ?
ड्याड त आँखै अगाडि नै हुनुहुन्थ्यो । प्रतियोगिताका बेला उहाँलाई हेर्दै मैले आत्मबल बढाएकी थिएँ । विजेता घोषणा भइसकेपछि ड्याडले पनि मेरो फोटो खिच्न तँछाडमछाड गरिरहनुभएको थियो । उहाँ एकदमै हषिर्त देखिनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला स्टेजमा उहाँलाई हग गरेर (अंगालो मारेर) खुसी सियर गर्ने मन थियो तर पाइनँ ।
मिस नेपालकै लागि भनेर बेलायतबाट आउनुभयो ।
हो, स्वदेशमा मात्र मेरो सपना पूरा हुन्थ्यो ।
मोडलिङ क्षेत्रलाई कसरी बुझ्नुभएको छ ?
सबैको आ-आफ्नै सोचाइ हुन्छ । मेरा लागि आत्मविश्वास बलियो बनाउने क्षेत्र भनेकै मोडलिङ हो । वेस्टर्न कन्ट्रीहरूमा मोडलिङ कल्चर एकदमै फराकिलो छ । यहाँ भने स्टार्टिङ फेज (बामे सर्दै) मै देख्छु । केही वर्षयता चाहिँ हामीकहाँ पनि मोडलिङ क्षेत्रलाई बुझ्न खोज्ने र मोडलहरूलाई पोजेटिभ रूपमा हेर्ने संस्कार विकास हुन थालेको पाएकी छु ।
जीवनलाई अघि बढाउन सघाउने तपाईंको खास व्यवहार ?
हा...हा...हा..। तपाईं पनि छक्क पर्नुहुन्छ । धेरै साथीहरू छक्क पर्छन् । म सार्‍है सिम्पल र पोजेटिभ थिङकिङ राख्ने युवती हुँ । जतिसुकै रिस उठाउने कुरा गरे पनि पोजेटिभ थिङकिङले तुरुन्तै रिस मार्ने गर्छु । अब त यो ह्याबिट (बानी) नै भइसक्यो । साथीहरू रिसाए भने मचाहिँ हाँसी-हाँसी गफ गरिदिन्छु । फ्याक्ट र तर्कपूर्ण कुरामा विश्वास गर्छु ।
आफ्नो मुलुकको कुन कुराको बढी गर्व लाग्छ ?
डाइभरसिटी (विविधता) छ हाम्रो कन्ट्रीमा । मल्टी कल्चरल -बहुसांस्कृतिक) अनि युनिटी -एकता) । मलाई यसप्रति गर्व लाग्छ ।
मिस वल्र्डमा प्रभावकारी भूमिका कसरी खेल्न सक्छु भन्ने सोचिरहेकी छु । जित्नु नजित्नु आफ्नो ठाउँमा छ । सकेसम्म मिहिनेत गर्ने योजना छ । दुई महिनाभर आफूलाई अझ बोल्ड र स्ट्रङ बनाउने कोसिस गर्नेछु ।
बेलायतमै ग्ल्यामर दुनियाँको स्वाद चाखिसक्नुभएको छ, नेपालमा मोडलिङसँगै फिल्मी करिअरतिर पनि केही सोच्नुभएको छ कि ?
हामी फिल्मलाई जति सहज लिन्छौं, मेरो विचारमा यो त्यति सजिलो फिल्ड हैन । एक्टिङ भनेको निकै गहन विषय हो । अहिले ममा त्यो क्षमता छ जस्तो लाग्दैन । अध्ययन गरेपछि चाहिँ यो फिल्मबारे नि सोच्न सकिन्छ । तत्कालका लागि केही सोचेकी छैन ।
लामो समयदेखि मुलुक बाहिर बस्दै आइरहनुभएको छ, स्वदेशका लागि....मैले जे गर्दै छु, स्वदेशकै लागि हो । केही सोसियल काम गर्ने सोचाइ छ । ह्युमन ट्राफिकिङ -मानव बेचविखन) को इस्युप्रति म गम्भीर छु । ट्रेनिङको फेजमा माइती नेपाल अवलोकन गर्ने मौका पाएका थियौं । त्यतिबेला दुःखी हुँदा पनि ह्याप्पी स्माइलिङ (चम्किलो मुस्कुराहट) भएका दिदीबहिनीका अनुहार देखें । उनीहरूको स्माइललाई निरन्तर राख्न मैले पनि केही गर्नुपर्छ जस्तो लागिरहेको छ ।
बुक्स पढिरहन मन लाग्छ । सकारात्मक सन्देश दिने बुक्स रुचाउँछु । अहिले चाहिँ 'द म्याजिक' पढ्दै छु । नारायणगोपालका गीत सुन्ने म पनि एक क्रेजी गर्ल हुँ । नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा घुम्ने रहर पनि छ ।
नेवार समुदायकी हुनुहुन्छ, मातृभाषा आउँछ ?
कुनै-कुनै शब्द मात्र बोल्न सक्छु । अबचाहिँ राम्रै गरी सिक्ने मन छ ।
आफ्नो समुदायको के कुराले मन छुन्छ ?
भेराइटिज फुड । त्यसमा पनि 'सेलरोटी' निकै मन पर्छ ।
लन्डन मिस गर्दै हुनुहुन्छ होला ?
पहिला जस्तो अब मनोमानी चल्दैन । मिस नेपालको ताज पहिरेकी छु । राष्ट्रले मप्रति देखिरहेको आशा, विश्वास र सम्भावनालाई मैले पूरा गर्नै पर्छ । एक डेढ वर्ष यतै बस्छु होला ।